FAAH FAAHIN:- Weerar Ururka Al-shabaab mar kale ay maanta ku qaadeen Xeebta Lamu ee Dalka Kenya. |
FAAH FAAHIN:- Weerar Ururka Al-shabaab mar kale ay maanta ku qaadeen Xeebta Lamu ee Dalka Kenya.
Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa weerar maanta oo jimce ah ururka Al-shabaab ay ka geysteen Jazeerada xeebta Lamu ee dalka Kenya ayaa sheegaya in Dagaalyahano ka tirsan Ururka Al-shabaab ay weerar khasaare badan dhaliyey halkaasi ku gaysteen.
Ugu Yaraan Lixdan Dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan ayaa lagu soo warramayaa in ay weerarkaasi gaysteen.
Weerarka AL-Shabaab lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen ayaa ka dhacay Xaafada Pandanguo ee Jaziirada Lamu , waxaana la sheegay kooxaha hubaysan in ay weerareen Saldhig booliis iyo goobo kale.
Sargaal katirsan booliiska Kenya ayaa Warbaahinta u sheegay in Rag hubaysan ay soo weerareen Saldhiga Booliiska Xaafada Pandanguo, waxaana uu sheegay in Kooxdaasi hubaysan ay halkaasi ka qaateen hub ay lahaayeen Ciidamada booliiska.
Raga Weeraray Xaafada Pandanguo ee Jaziirada Lamu ayaa dab qabadsiiyay guryo iyo Iskuulo , waxaana la tilmaamay in ay horey u qaateen ragaasi ilaa lix qorey ay lahaayeen Ciidamada booliiska ee Saldhiga Pandanguo .
Wali lama soo warin qasaaro dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhashay Weerarka maanta lagu qaaday Xaafada Pandanguo ee Jaziirada Lamu, waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo qasaaraha ka dhashay Weerarkaasi.
Weeraro khasaaro badan dhaliyay oo Masuuliyadiisa ay sheegteen Al-Shabaab ayaa marar kala duwan ka dhacay Deegaano hoos taga Jaziirada Lamu ee Gobolka Xeebta Dalka Kenya , waxaana Weerarada halkaasi ka dhacay waqtiyo isku dhaw lagu dilay dad ku dhaw 100-qof halka hanti badana lagu gubay.
Xafiiska wararka APL, Nairobi-kenya